Syria: ao an-tsainay i Gaza (2009) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2019 4:23 GMT
Maresaka be ny bilaogera Syriana hatramin'ny nisian'ny daroka baomba tany Gaza efa ho roa herinandro lasa izay. Ho an'ny Syriana maro, noho ny fakana maripanondroana miorim-paka lalina sy ela tamin'ny vahoaka Palestiniana izany. Ho an'ny sasany indray, misy ny lafiny tena manokana.
Bilaogera Syriana ampahany ary Palestiniana ampahany monina any Syria i Ruba. Akademika hajaina avy any Gaza ny rainy. Tamin'ny lahatsoratra tena mampihetsi-po sy manokana, mizara amintsika ny sasany amin'ireo fahatsiarovany tamin'ny fitsidihany tany Gaza izy:
Niverina nody izahay ny ampitso maraina, ary nahita potika baomba madinika, bala sy grenady natsipy tanana… nikorontana ny trano, vaky ny varavarankely, may avokoa ny zava-drehetra tao. Nitangorona nanodidina an'i dada ny mpifanolobodi-rindrina, nitabataba nilaza tamin'antsipirihany momba ny zava-nitranga ny alina lasa izy ireo… nilaza taminy izy ireo fa nisy angindimby nisidina tamin'ny alina, nidina tamin'ny tohatra mihantona ireo miaramila maro be nanao saro-tava ary nampiasa ny basin'izy ireo, namela lavaka teo amin'ny rindrina… nanipy grenady tao anatiny izy ireo, ka niteraka korontana sy tahotra teo amin'ny manodidina.
Te-handefa hafatra ny raiko, amin'ny maha-mpiady ho an'ny fahalalahana sady matahotra an'Andriamanitra azy, hafatra nilaza hoe: Tsy matahotra aho (toa efa zatra an'io karazan-javatra io izy).
Nitondra fanaka vaovao izy, nametraka varavarankely vaovao, ary raha vao azo nonenana ilay trano, dia napetraka tao anatiny izaho sy ny anadahiko ho mariky ny fihaikana. Najanona tao anaty efitrano tokana tsy misy setroka, nambenan'ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko marobe nandritra ny iray volana izahay.
Mizara amintsika ny fomba fiezahany mandroso mandritra ny andro i Rime Allaf amin'ny fahafantarana fa misy olona maty isaky ny fotoana rehetra any ho any ao Gaza:
Hatramin'ny nanombohan'i Israely ny fanafihana feno habibiana sy lozabe indrindra farany, hatramin'ny nanombohan'ireo baomba nilatsaka teo amin'ireo gadra ao Gaza sy ny famonoana ankizy an-jatony, tao anatin'ny fihetsika firaisankina bitika indrindra azoko aseho, nanao ny fehilambako Palestiniana eo ambonin'ny palitaoko aho, ary nanao marika Gaza ahy manokana hisehoana amin'ny resadresaka amin'ny fahitalavitra. (Vaovao maro momba izany no hivoaka tsy ho ela.) Miantso izany ho fihaikàna ny ankamaroan'ny haino aman-jery amin'ny fiteny anglisy, izay saika sarotra havahana amin'i Israely.
Ary avy eo miantso ny hisian'ny tena fiovana izy:
Miantso aho izao:
Mba hahalasa ny praiminisitra Tiorka Tayyip Erdogan ho filohan'ny Ligy Arabo;
Mba hahatonga ireo mpitondra Arabo sy ny sombiny mpanohana azy ho sesitany any Gaza rehefa tafaverina any an-tanindrazany ny Palestiniana;
Mba hahatonga ny Quartet (ny tompon'andraikitra rehetra, ny minisitra ary ny filoham-pirenena) handany ny mandrakizay ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana sady manoroka an'i Tony Blair, raha mampiasa ny zony hiaro ny tenany kosa i Israely;
Ho an'i Barack Obama mba haka sary an-tsaina milalao golf ao Jabaliya ary mianatra any amin'ny sekoly UNWRA ny zanany, ary “mamaly faty” kosa i Isiraely; ary
Hotsaraina ao amin'ny tribonaly ao La Haye anie ireo jiolahy an'ady ary handeha avy hatrany any amin'ny afobe.